Garoonka » MAXAMEDOW SPORTIGA MAXAA LAGA SHEEGAY.(Jillafyada London aad bay u badan tahay, laakiin….)
You are here:Home International Sports MAXAMEDOW SPORTIGA MAXAA LAGA SHEEGAY.(Jillafyada London aad bay u badan tahay, laakiin….)	0
MAXAMEDOW SPORTIGA MAXAA LAGA SHEEGAY.(Jillafyada London aad bay u badan tahay, laakiin….)
SHEEKADA MAXAMED IYO MUUSE AKHRISTAYAASHA AAD BAY UGA HELEEN. MAANTANA MAXAMED IYO MUUSE DOODDOODA AAD BAY U KULUSHAHAY. DOODDIINA WAXAY U DHACDAY SIDAN: MUUSE: Maxamedow sportiga maxaa laga sheegay?
MAXAMED: Sporti beele maalin walba waxaad la soo taagan tahay sportiga maxaa laga sheegay. Marka hore na salaan oo waxaan ku barinay na weyddii. Midda kale anigoo ku leh ama ku weyddiiyey ma aragtay Muusow sportiga maxaa laga sheegay? Dadkii oo dhan baad igu dirtay, oo la leeyahay Maxamedkan maalin walba, sportiga la weyddiiyo, xagguu ka yimid, halkee buu deggan yahay, yuu yahay iyo sportiga halkee buu ka soo galay.
MUUSE: Maxamedow dadka aad sheegayso maxaa iga galay anigu. Midda kale ma caafimaad qabtaa? Sheekada halkee baad iiga bilowday maanta. Buufisii dadkii aan ogaa maa ku soo gaaray. Aniga saaxiibkay ayaad tahay, wax walba waad i dhihi kartaa.
MAXAMED: Muusow aniga war la qariyo ma aqaan. Waxaad ii sheegtaa hadaladii aad ku tiri Maslax. Ma anigaan Muxsin uga horeeynin, garoonka bas ketka, kan kubadda cagta, kubadda miiska iyo weliba magaalada Xamar. Muusow adiga waad og tahay in aad xamar jiiro walba aqaan. Dadka maanta aniga igula doodaya sport ayaan ahay bal waxaad weyddiisaa halka ay ku taal Jiiro Norway, bal weyddii maqaayaddii koogaar, waxaad kaloo ii weyddiisaa Bar sport, midda kale ii weyddii Kuraajo del Suud. Muusow waxaan la yaabay dadka qaar sportiga iska sheeganaya, iyo kuwo kale oo yurub ku bartay macnaha sportiga. Aniga ma rabo in aan isku kaan faansho, laakiin kooxihii aan u soo dheelay waa la yaqaan, oo cid walba ayaa taqaan. Maanta oo aan qurbaha joogo ayaa waxay dadka qaar waxay rabaan in ay ii meeriyaan sport waxa uu yahay.
MUUSE: Maxamedow maanta caadi ma tihidee caadi iska dhig. Aniga Maslax war adiga kuugu saabsan ma dhihin. Sportina cid aadan adiga ahayn kalama sheekaysto. Maantase waxaa ii soo baxaya waxyaallo cusub oo dhankaaga ah. Su’aal ma ku weyddiin karaa?
MAXAMED: Haa waad i weyddiin kartaa.
MUUSE: Adiga Maxamed ahaan, kooxdee u soo cayaartay, sanadkee baad soo cayaartay, yaad isla soo cayaarteen, garoonkee ku soo ciyaartay. Midda kale saaxiib waxa aan su’aalahan kuu weyddiinayo ayaa waxay tahay ayaamahan ayaa waxaa na wareeriyey group sidaada oo kale ah. Maalin walbana ku dooda sport baan ahay. MAXAMED: Muusow marka hore waxaan ku mooday reer magaal, laakiin waxaan ogaaday maanta in aad tahay ciyaal gobol. Marka hore aniga halkan ayaan kugu bartay. Waxaanse laa yaabanahay su’aalo aan ku weyddiin lahayn ayaad i weyddiisay. Aniga waxaan moodayey in aad i taqaano, oo aad sal iyo baar ii taqaan. Laakiin meel baad iiga dhacday. Sportiga muxuu u hormari la’yahay ayaa maalin walba lays weyddiiya. Waxaa kaloo lays weyddiiyaa sportiga muxuu khilaaf uga dhammaan la’yahay, ilayn haddaan gartay adigoo kale ayaa ku jira Muusow.
MUUSE: Maxamedow labo nin oo saaxiib ah baanu nahay. Anaga yaanan isku soo jeesan. Umadda kale ayaa naga badan. Maantana haddii ay na maqlaan kuwan sportiga sheegta wey nagu ciidaysanayaan. Warka aan soo koobno. Waxaan ku weyddiiyey cayaarihii xagaaga wey dhammaadeen sanadkan, waxaan ka hadlayaa kuwa London lagu dhigay. Hal meel ayaa lagu qabtay, oo waa guul. Marka ma kula tahay in sanadka dambe hal meel lagu qaban doono.
MAXAMED: Muusow jillaafada London aad bay u badan tahay, laakiin aniga ra’yigayga haddaan ka hadlo waxaan dhihi lahaa:
Waxaa diyaariyey: Abdulkadir Caddaay